IMinenhle Broadcasting Academy – The Ulwazi Programme
Umuntu ngeke umenze lutho ngento akabelwe yona emhlabeni, sonke sizalwa sifumbethe okwethu ezandleni kanti ke noma sikhula sikhula nezifiso zokuthi esikufisayo kube impumelelo futhi kufezeke. Abanye abantu baphiwe ukuthi bakwazi ukuziphilisa ngokuzisebenza, abanye babe abammeli abanye babe amaciko njalonjalo. Kuleli khasi ke sithi ake siphinde sibhunge ngentokazi esencane kakhulu kepha imisebenzi yayo ekhulile futhi edinga ukunconywa ishayelwe izandla. Lapha sikhuluma ngo Minenhle Ngubane esake saloba ngaye kuyona lengosi. Noma kwabanye kungabukeka engathi ukuduma kwakhe kufukulwe ukuzalwa nabantu abaziwa kakhulu endimeni yomculo wesintu uMnikezwa Ngubane kanye neqhawe elingasekho uMjikijelwa Ngubane, kepha eqinisweni nje ukuduma kwalentokazi kulele kakhulu ekuzikhandleni kwayo nokuzimisela kwayo. Lentokazi esencane nangeminyaka iyayiphila futhi ikuyo ngaphakathi lento yokuba umsakazi.
Lentokazi isivule isikole sokufundela ukuba umsakazi njengoba phela naye enguyena umsakazi kanti lokhu kusho lukhulu ngoba phela kuveza ngokusobala ukuthi unayo nentshisekelo yokuthuthukisa nabanye abanesifiso sokusakaza ukuthi bafeze izifiso zabo. Igama lalesikole sibizwa nge-IMinenhle Broadcasting Academy, uthe lesikole sizofundisa siphinde siqeqeshe intsha enesifiso sokufundela ukuba abasakazi, abadidiyeli “producers”, ukufunda izindaba, abasakazi bezemidlalo kanye nokunye okuningi. Kanti ukuqinisekisile ukuthi abantu abazobe befundisa kulemikhakha ehlukene abantu asebemnkatshubomvu ezindimeni abakuzo ngoba kungabantu abasebenza nasebeke basebenza kuyo leyomkhakha. Ngaphambi kokuvalwa kwezwe ngenxa yeCovid-19 bebekade besebenzela ePinetown Crompton Street obhekene nesitolo sokudla uMcDonalds. Kulaba abangahlali eThekwini zizokwenziwa izinhlelo zokuthi kuziwe ezindaweni abahlala kuzo kodwa kuzomele babe inani eliyishumi kuyaphezulu ukuze kuzohanjelwa lapho abahlala khona. Indawo entsha okuzofundelwa khona lapha eThekwini isazokhishwa kwaziswe laba abanentshisekelo yokufunda. Kanti uthi ukuthakasele kakhulu ukusebenzisana nabanesifiso sokuzithuthukisa kulemikhakha abaqeqesha kuyo.
Isiqubulo sakulonyaka sithi #WhereDreamersMeet